Inona avy ireo tetik'asa mahomby hanamboarana tranonkala iray?
Raha vantany vao fantatry ny tomponà tranonkala fa tena ilaina ny fananganana rohy, manomboka mitady ny fomba hiverenana rindran-damina mankany amin'ny tranokalany izy ireo. Betsaka ny tetikady fanorenana rohy sy fomba izay mety hamitaka ny mpivarotra an-tserasera ary mitarika ho amin'ny vokatra ratsy. Izany no antony tokony hifantohanao tsara ny mety amin'ny tetik'asa momba ny fananganana orinasa ary hampihatra tsara azy ireo ao amin'ny tranokalanao.
Ity lahatsoratra ity dia natao hanehoana anao ny momba ny backlinks sarobidy ao amin'ny tranokalanao SEO ary inona no fomba tsara indrindra hananganana azy ireo.
Fomba hanamboarana tranonkala iray
Ny fomba fitambaran-tranonkala mahomby dia tokony hanomboka amin'ny fanadihadiana lalina. Ity fanadihadiana ity dia tokony hampiseho anao izay toerana mendrika ny fanentanana anao ary miseho amin'ny raharaham-barotrao.
Diniho ny tsenan'ny tsenanareo mba hitadiavam-pahaizana
Raha toa ny rindran-damba izay manondro ny toerana misy anao dia miseho amin'ny pejy Internet tsy dia tsara loatra, Azo inoana fa handratra ny ezaka ataonao eo amin'ny tranonkala ny rohy toy izany ary hanome famantarana mba hikaroka fitaovana izay ataonao amin'ny fanaovana asa an-tsokosoko. Izany no antony tokony hamaranao voalohany raha ilaina ny mametraka ny rohy ao amin'ny sehatra iray manokana na tsia. Raha hanombana ny kalitaon'ny tranonkala iray dia azonao atao ny mampiasa ny Semalt Website Analyzer. Azonao atao ny manome anao ny fomba rehetra ilaina hanampiana anao hamorona sary iray manontolo momba ny tranonkala iray. Ankoatra izany, azonao atao ny manamarina tranokalam-pifaneraserana amin'ny takelaka nofollow. Ny ordinatera manaraka ny rohy dia mamela ny sivana mifandraika amin'ny tranonkala fanondroana ary manome famantarana ho an'ny fitaovana fikarohana momba ny fahefam-bahoaka sy ny fitokisana. Na izany aza, ny mpamoaka sasany dia manatanteraka famantarana "nofollow" ho an'ny backlinks napetrak'izy ireo eo amin'ny pejiny. Tsy izany no tadiavinao. Ny bakalavaly toy izany dia tsy hitondra zava-tsarobidy ho anao ary handany ny fotoanao sy ny volanao fotsiny. Azonao atao ny manamarina raha misy rohy iray na dofollow na tsioka amin'ny alalan'ireo mpanara-maso izay nampidirina tao anaty navigateur maoderina.
Mamaritra tranonkala manam-pahaizana
Mba hijerena ny tompon'andraikitry ny sehatry ny vohikala, azonao atao ihany koa ny mampihatra ny Semalt Website Analyzer. Ny manam-pahefana eo an-toerana dia hevi-dàlana iray ahitana ny fitovian-tsoa isan-karazany toy ny PageRank, ny salan'isan'ny mpitsidika izay tonga amin'ny loharanon-tranonkala, ny tahan'ny famerenana tranokala sy ny kalitaon'ny backlinks izay manondro azy.
Diniho ny famoahana matetika
Ny loharanon-tranonkala dia azo raisina ho velona raha toa ka mamoaka hatrany ny fampahalalana manan-danja izay mety hanampy amin'ny mpampiasa. Ireo tranonkala mahomby dia mitazona ny votoatiny alohan'ny daty ary mamoaka azy farafaharatsiny indray mandeha isan-kerinandro. Noho izany dia mila mikendry ny taloha ianao ary misoroka ity farany ity tahaka ilay areti-mandringana.
Jereo ny tranokala fifamoivoizana
Mazava fa ny loharanon-tranonkala iray manana traikefa be dia be hitondra ireo loharano izay manana mpitsidika vitsivitsy isan'andro. Mba hanamarinana ny lanjan'ny fifamoivoizana dia azonao atao ihany koa ny manondro ny fitaovan'ny tranonkala Semalt Website Analyzer. Ataovy azo antoka fa ataovy izany alohan'ny hamoahana ny tompon-tranonkala iray Source .